October 2014 ~ MM Daily Star
အစားမစား သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာပြီ ဖြစ်သည့် သားငယ်ကြောင...
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို DNA ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ ထိုင်းဝန...
ISIS မှ အီဘိုလာ ကူးနေသူ ဟုဆိုသော အမျိုးသားတစ်ဦးေ...
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်....... ( စိမ်းနေခြင်းကြောင့်...
အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် စွဲဆိုခံထားရသော မ...
ဝဋ်ရှိလို့ ပေးဆပ်ရတယ်မှတ်ပါ ညီငယ်
လူသတ်မှု အတွက် AC အရက်ဘား ပိုင်ရှင် လိပ်ကျွန်း သူကြ...
နာမည်ကြီးကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်အမျိုးသမီးကို အိုင်အက်စ်တ...
ငါးဒေါ်လာသာကုန်မည့် ဆံပင်ညှပ်မှုပြုလုပ်ရာမှ ဆိုင်ဝန်...
စစ်ဆင်ရေး အသုံးစရိတ် ယခုနှစ်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ဗိုင်းရပ်စ် ကိုး...
ထောင် ၁၅ နှစ်ကျလည်း ကျပါစေဟု ဆိုကာ ၁၆ နှစ်သမီးလေးက...
အမှန်တရား လမ်းစပေါ်လာတဲ့ လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု
တပ်မတော် တောင်းခံငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာ တိုက်ခိုက်ရေ...
ထိုင်းလူသတ်မှု ကိစ္စဆောင်ရွက်သူများ မှ အသိပေးစာထုတ်
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကမ္ဘာကြီး ၆ ရက်ကြာ အမှောင်ကျ သွားမည်...
စွပ်စွဲခံ မြန်မာ နှစ်ဦး နှင့် ထိုင်းလူသတ်မှု နောက်...
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြေ...
အစားမစား သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာပြီ ဖြစ်သည့် သားငယ်ကြောင့် မိဘများ စိုးရိမ်နေ
အင်္ဂလန် နိုင်ငံက လန်ဒန်ဂျုံး ဆိုသူ ၁၂ နှစ်သား ယောက်ျားလေး တစ်ဦးသည် အာဟာရ သိဒ္ဓိ ပြီးပြည့်နေ သလို အစားမစာ၊ ရေမသောက်နှင့် ဆာလောင် ခြင်းလည်း အလျဉ်းမရှိဘဲ နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ကြာမျှ ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
တစ်ခုသော ညက လန်ဒန်သည် ပီဇာနှင့် ရေခဲမုန့် ကို တနင့်တပိုး စားသောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ နောက်တစ်နေ့ နံနက် ခုနှစ် သက္ကရာဇ် အားဖြင့် ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၁၄ရက် ၎င်းနိုးထ ခဲ့ချိန်မှ စကာ အစား စားချင်စိတ် မရှိဘဲ ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ထိုတစ်နေ့ လုံးနီးပါး မူးဝေခြင်းဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ရ သည်ဟု ဆိုသည်။ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကို များဖြင့် ပန်းခြံထဲ ဆော့ကစား ရသည်ကို နှစ်သက်သည့် လန်ဒန်အတွက် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်လာ သဖြင့် မိဘဖြစ်သူ များက စိုးရိမ်ပို ခဲ့ရသည်။ သားဖြစ်သူတွင် မည်သို့ သော ဝေဒနာမျိုး စွဲနေသည် ဆိုသည် ကိုလည်း မသိရ၍ စိတ်ပန်း လူပန်း ဖြစ်ရတော့သည်။
လန်ဒန်အား ပြသရန် ဆရာဝန်များ ရှာခဲ့သည် မှာလည်း မြို့ ငါးမြို့ အထိပင် နှံ့ ခဲ့သည်။ သို့ သော်လည်း အားလုံးသော ဆရာဝန်များက လန်ဒန်၏ ဝေဒနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လက်လျော့ ခဲ့ရသည်။ လန်ဒန်သည် ဝေဒနာ မခံစားရ မီက ပေါင် ၁၀၄ ပေါင် ရှိခဲ့သည့် လူငယ်ကလေး တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အစားအစာပဲ နေထိုင် ခြင်းကြောင့် ပေါင် ၃၆ ပေါင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ ဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ကိုယ်အလေးချိန် ၆၈ ပေါင်သာ ရှိတော့သည်။
မိဘဖြစ်သူများက လန်ဒန် အစားစားချင်လာအောင် အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ ကြိုးစား ကြသော်လည်း မအောင်မြင်ပေ။ တစ်ခါတစ်ရံသာ ဆင်းဒ၀စ်ခ်ျ အနည်းငယ်ကို တစ်ဖဲ့စာလောက် စားသုံးခြင်း ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်ပွားသော ရောဂါများ ကိုသာ အဓိကထား သုတေသနပြု ကုသသည့် အမျိုးသား ကျန်းမာရေး သိပ္ပံက လန်ဒန်အား စစ်ဆေး ကုသရန် စိုင်းပြင်းလျက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
အစား အသောက် မစားသည်မှာ တစ်နှစ်ခန့် ကြာပြီ ဖြစ်သည့် လန်ဒန်ဂျုံး။ ဓာတ်ပုံ - Daily Mail
15:00 ပညာရေး, သတင်း No comments
မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို DNA ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ခွင့်ပြု
ထိုင်းနိုင်ငံ ခိုထောင်းကျွန်း ခေါ် လိပ်ကျွန်းမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ကိုဝင်းဇော်ထွန်း နဲ့ ကိုဇော်လင်းတို့ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ DNA ကို ထပ်မံစစ်ဆေး ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဒီကနေ့ ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။
သူတိုနှစ်ဦးကို အရင်က စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေဟာ တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ယူဆရင် ဒုတိယအကြိမ် DNA ထပ်မံစစ်ဆေးခွင့်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာက ဒီကနေ့ သတင်းထောက်တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ အခုလို ပြောလိုက်တာပါ။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဒီပြောကြားချက်အရ DNA ထပ်မံ စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် သူတို့အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေ တဲ့ အကျိုးဆောင်တွေကို အကြောင်းကြားပြီးမှ ဆောင် ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာသံရုံး အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့်က ရှင်းပြပါတယ်။
"သူတို့ဝန်ကြီးချုပ်က ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာ ဒီရဲတွေအနေနဲ့ သူတို့အရင်စစ်ထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခုထပ်စစ်ဖို့အတွက် ခွင့်ပြုမယ်၊ သူတို့အချင်းချင်း အောက်ကိုညွှန်ကြားမယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ၊ စစ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုစစ်ခံရတဲ့ တရားခံရဲ့ အကျိုးဆောင်ပါရှိနေရမှာပါ၊ ဒီအမှုက စစချင်းစစ်တဲ့အချိန်မှာကတည်းက ရှေ့နေရှိရမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အဲ့ရှေ့နေ မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းက ပေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့က ရှေ့နေ ကိုယ်စားလှယ်ပါဝါနဲ့ ၁၄ ရက် ၁ဝ လ ၂ဝ၁၄ က ကြိုတင်သက်သေထွက်ချက်တွေ ယူခဲ့ပြီးပါပြီ၊ အဲ့အချိန်မှာလည်း ကျနော်တို့ဖက် က ရှေ့နေတွေပါပြီးပါပြီ၊ အခု ဒီတရားခံကလေးတွေကို စစ်ချက်ပြန်လည်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ကို အကြောင်းကြားရမှာပါ၊ အဲဒီ့အခါ ကျနော်တို့လည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းလို့ရမှာပါ"
ဒီကနေ့မှာဘဲ မြန်မာသံအမတ်ဦးဆောင်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အမှုကိုအပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းထွန်းနဲ့ ကိုဇော်လင်း တို့နှစ်ဦး နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရမှု ရှိ၊ မရှိနဲ့ အမှုတရားမျှတမှုရှိရေအတွက် ထိုင်းရှေ့နေများကောင်စီနဲ့ ထိုင်းအမျိုးသား လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ISIS မှ အီဘိုလာ ကူးနေသူ ဟုဆိုသော အမျိုးသားတစ်ဦး ခွေးမအား မုဒိန်းကျင့်၊ ခွေးမအား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားရ
13:20 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
ပုံ-ခွေးမ Layla နှင့် သခင်ဖြစ်သူ Alice Woodruffအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်နတ္တိကတ်ပြည်နယ်မှ အယ်လစ်ဝုဒ်ဒရပ်ဖ်ဆိုသူ အမျိုးသမီး၏ ရန်လိုတတ်သည့် Pit Bull အမျိုးအစား ခွေးမအား အိမ်နီးပါချင်းအမျိုးသားက ISIS နှင့် Ebola ရောဂါတို့အကြောင်း အော်ဟစ်လျက် ဗလက်ကာယပြုကျင့်နေသည်ကိုတွေ့ရှိ၍ အထိတ်တလန့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အဆိုပါကိစ္စသည် လွန်ခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခွေးပိုင်ရှင် ၀ုဒ်ဒရပ်ဖ်သည် အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် ပိုင်နတ်ကျုးလွန်လာသူအား သေနတ်ဖြင့်ချိန်ရွယ်၍ သူမ၏ခွေးအား ကယ်ဆယ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
၎င်းအမျိုးသားသည် စိတ္တဇရောဂါဝေဒနာရှင်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပြီး ယင်းသို့သေနတ်ဖြင့် ချိန်ရွယ်မှုကိုပင် ဂရုမပြုခဲ့ပေ။ ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် ၎င်းသည် ISIS အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံနေရသူဖြစ်ကြောင်း အော်ဟစ်ကြွေးကြော်၍ ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားခြင်းပင် ပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ယင်းအပြင် ၎င်းအမျိုးသားသည် ခရစ်တော်အားဆန့်ကျင်သူဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုပြီး ခွေးပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုပင် ပွေ့ဖက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု ကာယကံရှင် ၀ုဒ်ဒရပ်ဖ်ကပြောသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးအချိန်မီရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းအမျုိုးသားအား မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းအား ဖမ်းဆီး၍ စစ်ဆေးမှုပြုရန်အတွက် စိတ်ရောဂါဆေးရုံသို့ ပိုဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၁၂နှစ်အရွယ် Pit Bull ၏ အောက်၌ ၎င်းအမျိုးသား လဲလျောင်းနေသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရစဉ်က သူမ၏ခွေးက ခြံအတွင်းသို့ ကျုးကျော်လာသူတဦးအား ကိုက်သတ်ခဲ့ခြင်းပေလောဟု ကနဦးက ယူဆခဲ့မိသေးသည်။ သို့ရာတွင် အနီးကပ်ကြည့်မိသောအခါမှ ပေါင်၈၀၀ အလေးချိန်ရှိချိန်းကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည့် သူမ၏ခွေးအား ၎င်းအမျိုးသားက မုဒိမ်းပြုကျင့်နေသည်ကို သိခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကြောင့် တုန်လှုပ်နေသော ၀ုဒ်ဒရပ်ဖ်က ရဲစခန်းတွင် ထွက်ဆိုသည်။
“ကျမသူ့ကို ဖယောင်းတိုင်နဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ထွက်သွားဖို့ အော်သေးတယ်၊ သူက သူဟာ ISIS အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်၊ သူမှာ အီဘိုလာရောဂါရှိပြီး ခွေးကိုလည်း အီဘိုလာကူးသွားပြီလို့ ပြောတယ်။”
ယင်းနောက် မစ္စ၀ုဒ်ဒရပ်ဖ် က သေနတ်ယူကာ သတိပေးသည့်အနေဖြင့် သေနတ်တချက်ပင် ပစ်ဖေါက်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းအမျိုးသားက လက်ကိုဆန့်တန်းပြီး သူမထံသို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့လာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းသေလျှင် အားလုံးသေမည်ဟု ကြိမ်းဝါးကြောင်း ၀ုဒ်ဒရပ်ဖ်က ပြောပြသည်။
၀ုဒ်ဒရပ်ဖ်သည် သူမကိုယ်တိုင် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအမျိုးသားအတွက် ဂရုဏာသက်မိသော်လည်း တချိန်တည်းမှာပင် သူမ၏ အသက်အန္တရာယ်အတွက်လည်း စိုးထိတ်နေခဲ့မိသည်ဟု ဆိုသည်။
၎င်းအမျိုးသား ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက် ၂နာရီအကြာတွင် ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအား တိရစ္ဆာန်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှု၊ ဗလက်ကာယမှုနှင့် တည်ငြိမ်အေးငြိမ်းချမ်းမှု ဖေါက်ဖျက်မှုတို့ဖြင့် အရေးယူထားသည်။
ခွေးမ Layla အား ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေနှင့် ပဋိဇီဝဆေး ပေးထားပြီး လက်ရှိတွင် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်....... ( စိမ်းနေခြင်းကြောင့်သာ.. )
13:19 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
နာမည်ကျော် ဒရမ်မာစီးရီး ကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Love Story In Harvard ဇာတ်ကားထဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုကိုမျက်စိထဲပြန်မြင်နေရတယ် ။ ဟားဗက်ဥပဒေကျောင်းရဲ့ တရားရုံးပုံစံငယ်တစ်ခုမှာအပြင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အမှု တွေကို အုပ်စု ၂ စုခွဲပြီး တရားလိုဘက် ၊ တရားခံ ဘက် ရှေ့နေလိုက်ကြရင်း ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆွေးနွေးငြင်းခုန်နေတာပါ ။ လူမည်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကစူပါမားကတ်မှာ
ဈေးဝယ် ရင်း ပစ္စည်းခိုးတယ်လို့ စွတ်စွဲခံရတဲ့အတွက် ရှာဖွေခြင်းခံရပါတယ် ။ အဲဒီအတွက် အရှက်ရပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒီအမှုကို Kim Hyun-woo ဦးဆောင်တဲ့ ဟားဗက်ဥပဒေကျောင်းသားများအဖွဲ့က တရားရှုံးသွားတဲ့ မစ်စ်ဆူဇန် ရဲ့ ဘက်ကနေ ရှေ့နေ အဖြစ် တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
ပုံစံငယ် တရားရုံးမှာ ဥပဒေကျောင်းသားလေး Kim Hyun-woo က လျှောက်လဲချက်ပေးရင်း တရားသူကြီးပါမောက္ခ တွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တစ်ခုဖွင့်ပြပါတယ် ။
" ဒါဟာ သာမန်ချိန် စူပါမားကတ်မှာ ဈေးဝယ်သူတစ်ယောက်ကို မသင်္ကာတဲ့ခါ လုံခြုံရေးတွေက စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံ ဗီဒီယိုဖိုင် လေးဖြစ်ပါတယ် ။ မည်သူ့ကို မျှ ဝတ်လစ်စလစ် ချွတ်ပီး မစစ်ဆေးကြပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ လူမည်းအမျိုးသမီးကို မသင်္ကာလို့ စစ်ဆေးတဲ့ခါမှာတော့သာမန် စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပဲ လူတစ်ယောက် အရှက်ရလောက်အောင် ၊ ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်လောက်အောင် ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်လောက်အောင် တစ်ကိုယ်လုံးဝစ်လစ်စလစ်ချွတ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် " ။ " တရားသူကြီးမင်းတို့ခင်ဗျာ ။ အဲဒါဟာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ ။ တူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှ ဘာလို့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ မတူညီရတာပါလဲ ။ အဖြေကရှင်းပါတယ် ။ "
"Because .... of .... B L A C K " ။ သူတို့ ဟာ လူမည်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ ... တဲ့ ။
ခုတလောမှာ ဟော့ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းရာက သတင်းထောက်ကိုပါကြီး အကြောင်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် ။ အဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ လူတစ်ယောက်သေဆုံးတာဟာဝမ်းမြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး ။ မည်သူပင် ဖြစ် ပါစေ လူတစ်ယောက် လူ့လောကထဲက ပျောက်ကွယ်သွားတာ ၊ ဇနီးသည်တစ်ယောက်အတွက် ခင်ပွန်းဆုံးရှုံးသွားတာ ၊ သားသမီးတွေအတွက် ဖခင်တစ်ယောက်
ဆုံးရှုံးသွားတာ ဟာ အသေအချာ ဖြစ်ပါတယ် ။ သေဆုံးသူ ကိုပါကြီးရဲ့ ဇနီးသည် တရားစွဲဆိုတာ ၊ အမှုဖွင့် တာ ဟာလည်းဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်လုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့
သူ့အတွက် တရားမျှတ မှု ၊ သိသာထင်ရှားမှု လိုအပ်ပါတယ် ။
အမှု ဖွင့် ၊ သက်ဆိုင်ရာ မှုခင်းဆရာဝန် ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးရဲအရာရှိတွေ က စစ်ဆေး ဘယ်လိုသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်တရားရုံး က အချက်လက်တွေ ရယူ ၊ တရားခံ ၊ တရားလိုဘက်က ပစ္စည်းသက်သေ ၊ လူသက်သေတွေ ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို စစ်ဆေး ကြမယ် ။ တကယ်လို့ သတင်းထောက်ကိုပါကြီးဟာတပ်မတော်က ပြောသလို KKO အဖွဲ့က လက်နက်ကိုင်တစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဒါဟာ လူသတ်မှု ဖြစ်ပါတယ် ။ လူသတ်မှု ဥပဒေပုဒ်မတွေအတိုင်း ပစ်ခဲ့တဲ့စစ်သည်ကိုအရေးယူ ၊ တာဝန်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှူး ၊ တပ်ရင်းမှူးတွေ ကို စစ်ဘက်ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အတိုင်း တာဝန်ရှိမှု အတွက် အပြစ်ပေး ။ တကယ်လို့ ကိုပါကြီး ဟာ သတင်းထောက်အပြင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ သေနတ်လုခံရလို့ ခုခံကာကွယ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုရင် .... သက်ဆိုင်ရာ စစ်မြေပြင်ဥပဒေ/ တန်းပြည့်စစ်မှုထမ်းချိန်ဥပဒေ များအတိုင်း စစ်သည် ဟာ ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို ခံစားခွင့်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ တရားလိုလည်းရှိနေပြီ ၊ တရားခံလည်း ရှိနေပြီ ၊ အကြောင်းခြင်းရာ မှန်မမှန် စစ်ဆေး ဖို့ သာ လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံး ဟာ ရိုးရိုးလေးပါပဲ ။ တပ်မတော် ဟာ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ကွပ်ကဲမှုတွေနဲ့ တာဝန်ယူရမှာဖြစ်သလို ၊ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့လည်း ဘာမှ ပြောစရာမလိုပါ ဘူး။
တစ်ကိုယ်ရေ အမြင် ကတော့ ကိုပါကြီးဟာ သတင်းထောက်တွေဘက်က ပြောသလို သတင်းထောက်သာဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ နဲ့ လုံးဝပက်သက်သူ မဟုတ်ဘူးလို့ ကံသေကံမ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိမနေသလို ၊တပ်မတော် က ထုတ်ပြန်သလို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင် သာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သေချာပေါက်ပြောလို့မရပါဘူး ။ ဘာကြောင့် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ နဲ့ ပက်သက်မနေဘူးလို့ ပြောမရသလဲဆိုရင်နောက်ကြောင်းရာဇဝင်တွေ နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ ယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာ ၊ ကိုပါကြီးဟုတ်မဟုတ် ငြင်းနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကို ခဏ ထားလိုက်ပါ ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ က စစ်ထွက် မိန့်ခွန်း ပြောနေတဲ့ချိန်ရိုက်ထားတဲ့ပုံ ကို ကိုပါကြီးကိုယ်တိုင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်ချိန်မှာ စစ်ထွက် မိန့်ခွန်း ပြောသလဲ စစ်သားတွေသိပါတယ် ။ စစ်ချီမဲ့အချိန် ၊ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မဲ့အချိန် ၊ တိုက်စစ်ဆင်နွှဲမဲ့အချိန် ..အဲဒီအချိန်တွေမှာ
လက်အောက်က စစ်သည်တွေကို ဘယ်ကို သွားမယ် ၊ ဘာလုပ်မယ် ၊ ဘာကိုတော့မလုပ်ကြရဘူးဆိုတာ လက်အောက်ကစစ်သည်တွေကို ညွှန်ကြားချက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီညွှန်ကြားချက် တွေမှာလည်း
အောက်ခြေစစ်သည် သိရမဲ့ အကြောင်းရာ နဲ့ တပ်စုမှူး ၊ တစ်ခွဲမှူး ၊ တပ်ရင်းမှူး စတဲ့ ဦးစီးခေါင်းဆောင်တွေသိရမဲ့ အကြောင်းရာ ဟာ မတူပါဘူး ။ အဲဒီ အကြောင်းရာတွေ ဟာ ကိုယ့်တပ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မဲ့ အစီစဉ်တွေဖြစ်လို့ စစ်သည်တွေရဲ့ အသက်နဲ့ အတူတူ အရေးကြီးပါတယ် ။ အဲဒီအစီအစဉ် သတင်းကိုသာ တစ်ဖက်ရန်သူ က ကြိုသိလို့ ချေမှုန်းခံခဲ့ရရင် စစ်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ပါတယ် ။ အဲလို အချိန်မှာ ကိုပါကြီး ဟာ ဘာကြောင့် အဲဒီနေရာမှာ ရှိနေသလဲ။
သာမန်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ကို DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ/ခေါင်းဆောင်တွေ က အသက်နဲ့ထပ်ပြီးယုံကြည် နိုင်ပါသလား ။ တကယ်လို့ ကိုပါကြီး နေရာမှာ သာ စစ်တပ်သတင်းပေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် DKBA တပ်ဖွဲ့တွေ ဘယ်လို ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါသလဲ ။ ဒါဟာ စဉ်းစားစရာအချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ။ နောက် တပ်မတော်ထုတ်ပြန်သလို KKO တပ်ဖွဲ့ဝင်လို့ ကံသေကံမ ပြောလို့ မရတာ က ကိုပါကြီးဟာ သတင်းဆောင်းပါးတွေ ရေးသားပေးပို့ နေသူ
ဖြစ်လို့ပါပဲ ။ လက်ရှိသတင်း ထောက်လုပ်နေပါတယ်လို့ အာမခံနိုင်သူ သတင်းသမားတွေ ရှိနေလို့ပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ကိုပါကြီး ဘယ်သူဖြစ်နိုင်သလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ 50/50 ပါပဲ ။
100 စီ သေချာနေသူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် ။
ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေ အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ် ခဲ့တဲ့ ကိုပါကြီး ဆန်ဆန် အမှု မျိုးတွေ မြောက်များစွာရှိခဲ့ပါတယ် ။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မှာ အသတ်ခံ ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေ ။ အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေ ။ပြန်ပေးဆွဲ ခံ ခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေ ၊ သိပ်မကြသေးခင် က လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့ ဗိုလ်တဲ မှာ သေဆုံးသွားကြတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေ ။ အဲဒီလူတွေ အတွက်ကော တရားမျှတမှု ဆိုတာ မရှိသင့်ဘူးလား ။ သူတို့ကရော ပြည်သူတွေ မဟုတ်ကြလိုလား။လူတွေ မဟုတ်ကြလို့လား ။ မထူးဆန်းတဲ့ လူ့လောကထဲ အမှု အခင်းတစ်ခုအတွက် ထူးဆန်းနေတာတွေတော့ရှိပါတယ် ။ စံ ဆိုတဲ့ ဖြောင့်မတ်မှု ဟာ မည်သည့်နေရာ ၊ မည်သည့်ချိန်ခါတွင်မှ ချိုင်ခွက် ကောက်ကွေး မနေပါဘူး ။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာတွေ တုန်းက ရေငုံ နှုတ်ပိတ် နေခဲ့ကြသူတွေ ဟာ ယခုအခါမှာတော့ စတိတ်မန့်ကိုယ်စီ ထွက်လာကြတာ ပါပဲ ။ နောက် တရားမျှတမှု ဆို ပြီးတောင်းဆိုလာကြတာပါပဲ ။ " လူသတ်ရာမှာ လက်ယဉ်နေပြီးလား" ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးတွေ နဲ့ ဖော်ပြလာကြတာပါပဲ ။ မတိကျ မသေချာသေးတဲ့ အမှု အခင်းတစ်ခုအတွက် လူစုပြီး ဖိအားပေးလာကြတာပါပဲ ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။ တူညီသော အကြောင်းရင်းခံတွေမှာ ဘာလို့ တုန့်ပြန်မှုတွေ ကကွဲပြားနေရတာပါလဲ ။ တူညီတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ လိုချင်တဲ့ တရားမျှတမှု တွေ ဟာ ဘာလို့ မတူညီရတာပါလဲ ။ အဖြေဟာ သိပ်ကိုရှင်းလင်း ပါတယ် ။
ဟားဗက် ဇာတ်ကားထဲ က Kim Hyun-woo ရဲ့ စကားကို ငှား ပြောရရင် .... " Because Of G R E E N " ။ အမှန်အမှား ၊ တရားမျှတမှု ၊ တရားဥပဒေ ဆိုတာ တွေ ထက် ....ကျူးလွန် ခဲ့ တယ် ဆိုသူတွေဟာ တပ်မတော်သား များ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ ။ညိမ်းညို ရဲ့ ရေချမ်းစဉ် ကဗျာလေးထဲကလိုပါပဲ ...
ဘာကိုမှ အရေးမလုပ်ပဲနေနေတာ မဟုတ်ပါဘူး
အမှန်နဲ့အမှား ဘယ်လိုချို ဘယ်လိုခါးတယ်ဆိုတာ
ရေချမ်းစဉ်လေးအဖြစ်နဲ့လည်း ငါမှတ်သားနေမိပါတယ် ...
အပြစ်ရှိကြောင်း ထင်ရှာ နေတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဘယ်သော အခါမှ ကာကွယ် ပေးမှာ မဟုတ်ပါ ။ ကိုယ့်ခံယူချက် ၊ ယုံကြည်ချက်အတွက် ကိုယ့်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်တိမ်မြုပ်
ကိုယ့် အလုပ်ကို လုပ်ရင်း တာဝန်ကျေနေဦးမှာပါ ။ နောက်လူငယ်တွေအဖြစ် ဒေါသ ၊ အာဃာတ ဆိုတာတွေကို ကျွန်တော် တို့ တတ်နိုင်သလောက် ငြှိမ်းသတ်ထားပါတယ် ။
သို့သော် .... ဘယ်သူတွေ က ဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ တိတ်တိတ် ကလေး မှတ်သားနေပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ တွေ မှတ်သားနေဦးမှာပါ ။
အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြင့် စွဲဆိုခံထားရသော မလေးရှား သံတမန် နယူးဇီလန်တွင် အာမခံရ
13:17 မုဒိန်း မှုများ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
မလေးရှား စစ်သံတမန် မိုဟာမက် ရစ်ဇယ်မန် အစ္စမေးလ် (ဓာတ်ပုံ- အေအက်ဖ်ပီ)
အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုတစ်ခုအတွက် စွပ်စွဲခံထားရသူ မလေးရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ဆိုင်ရာ သံတမန်သည် နယူးဇီလန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခံရပြီးနောက် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က အာမခံရရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုဟာမက် ရစ်ဇယ်မန် အစ္စမေးလ်သည် သံတမန်အခွင့်အရေးဖြင့် နယူးဇီလန်မှ မလေးရှားသို့ ပြန်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ထွက်ပြေးလာခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ၎င်း၏ ရှေ့နေဖြစ်သူက ခုခံပြောကြားသည်။
ယခုအခါ မိုဟာမက်ရစ်ဇယ်မန် အစ္စမေးလ် သည် တင်းကြပ်သည့် စောင့်ကြပ်မှုများအောက်တွင် နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ၎င်း၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လည်း ရုပ်သိမ်းခံရမည်ဖြစ်ကာ အခြားသော မလေးရှား စစ်သံမှူးနှစ်ဦး၏ စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် ရှိနေရမည်ဖြစ် သည်။
အသက် ၃၈ နှစ်အရွယ်ရှိ အစ္စမေးလ်သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ၀ယ်လင်တန် တရားရုံးတွင် အာမခံရရှိရေးအတွက် လာရောက်ကြားနာခဲ့ရာတွင်
အနက်ရောင်ရှပ်အကျီနှင့် ဘောင်းဘီတို့ကို ၀တ်ဆင်ထားခဲ့ပြီး တရားရုံးဝက်ခြံထဲတွင် ငြိမ်သက်စွာရှိနေခဲ့သည်။
အစ္စမေးလ်သည် ပြီးခဲ့သည့် မေလက နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ မလေးရှားသံတမန် ကော်မရှင်ရုံးတည်ရှိရာ ၀ယ်လင်တန် အရပ်၌ နေထိုင်သော အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိ တာနီယာ ဘလင်စလေးဆိုသူ အမျိုးသမီး၏နေအိမ်တွင်းသို့ တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်၍ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခံထားရပြီး သူတစ်ပါးအိမ်တွင်းသို့ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှုများဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
မလေးရှားအာဏာပိုင်များက ယခုကိစ္စတွင် သံတမန် အခွင့်ထူးများဖြင့် ခွင့်လွှတ်ပေးမည်မဟုတ်ဟု နယူးဇီလန် တာဝန်ရှိသူများအား ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အစ္စမေးလ်သည် နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။
အစ္စမေးလ်အနေဖြင့် မလေးရှားသို့ ပြန်လာရန် မလေးရှား တာဝန်ရှိသူများက လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အစ္စမေးလ်၏ ရှေ့နေ ဒိုနေး စတီဗင်က ပြောသည်။
“ သူ ထွက်ပြေးဖို့အတွက် နယူးဇီလန်က ထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ မလေးရှားအစိုးရက ညွှန်ကြားခဲ့တာပါ၊ နောက်ပြီး သူက စစ်တပ်က အရာရှိတစ်ယောက်ဆိုတော့ အမိန့်နာခံဖို့လိုတယ်လေ” ဟု စတီဗင်က ပြောသည်။
13:06 သူ့အတွေး သူ့အမြင် 1 comment
စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့သူ တွေကို တန်းစီလိုက်
တနှစ်မှာ ၁၀ ရက်ထက်ပိုတဲ့ ခွင့်ခံစားမှု ၂ ကြိမ်အထက်ရတဲ့သူရှိရင်
(တချို့က တကြိမ်တောင်မရဘူး)
မိသားစုနဲ့အမြဲခွဲနေရတဲ့ အကိုတို့က ပိုနားလည်ပါတယ်
KIO /KIA တွေ မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းဖောက်ခွဲတော့
ဘယ်လူ့အဖွဲ့အစည်း ကမှ လက်ညိုးမထိုးရဲဘူး
မြဝတီ မှာ စာသင်ကျောင်းကို
ဘယ်ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းမှ လူ့ကြေငြာစတမ်းစာရွက်တွေ ထွက်မလာဘူး
မျိုးစောင့်ဥပဒေ အရေးမှာ
ဘယ် ၈၈ ခေါင်းဆောင်မှ မတက်ကြွဘူး
လူ လူခြင်းတူတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးမှာ
စစ်တပ် နဲ့ ပါတီ
ဟိုလူ နဲ့ ဒီလူ ခွဲနေသမျှ ကာလပတ်လုံး
ညီလေးဇော်မျိုးထက်ရေ
လူသတ်မှု အတွက် AC အရက်ဘား ပိုင်ရှင် လိပ်ကျွန်း သူကြီးသား DNA စစ်ဆေးခံမည်
13:02 သတင်း No comments
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မျိုးဗီဇ(DNA) စစ်ဆေးခံရန် ငြင်းဆိုထားသော AC အရက်ဘား ပိုင်ရှင် ကျွန်း သူကြီးသား Warot Tuwichianက ယခုအခါ လူသိရှင်ကြား စစ်ဆေးခံယူတော့မည်ဟု ယမန်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်၍ ပြောဆိုလိုက်သည်။
လူသတ်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့နေ၍ DNA စစ်ဆေးခံရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယမန်နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ထိုင်း အမျိုသား ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် မစ္စတာ Somyot Pumpanmuang နှင့် ထိုင်း အာဏာပိုင် တချို့ လည်း အတူရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမတိုင်ခင် AC ဘားဆိုင်ပိုင်ရှင် လိပ်ကျွန်းသူကြီး မစ္စတာ Woraphan က ထိုင်းအမျိုးသား ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် နှင့် သွားရောက်တွေ့ ဆုံပြီး ထိုင်းလူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများက လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုတွင် ၄င်းတို့မိသားစု ပါဝင်ပတ်သက် နေ သည်ဟူသော စွပ်စွဲနေမှုများကို သံသယရှင်းလင်းစေရန် သားဖြစ်သူက DNA စစ်ဆေးပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များကို ပြောဆိုခဲ့ သည်။
လိပ်ကျွန်း သူကြီး မစ္စတာ Woraphan ၏ ညီဖြစ်သူ အသက် ၄၅ နှစ်ရှိ မစ္စတာ Montriwat Tuwichian နှင့် သားဖြစ်သူ အသက် ၂၂ နှစ် ရှိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား Warot Tuwichian တို့သည် လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ DNA စစ် ဆေးမှု ခံယူခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထိုင်းသတင်းများက ရေးသားကြသည်။
၄င်းတို့ ၂ ဦးသည် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်ကာလက CCTV မှတ်တမ်းများတွင် လူသတ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု သံသယရှိသူများအဖြစ် CSI LA ဆိုသည့် ထိုင်း လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာအပါအ၀င် အခြားသော လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေဖန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားခံအဖြစ် ထိုင်းရဲက ဖမ်းဆီးထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား မောင်ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် မောင် ဇော်လင်းတို့ကလည်း ၄င်းတို့အား ရဲနှင့် စကားပြန်တို့က အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်နှိပ်စက်၍ ၀န်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း ၄င်းတို့၏မိသားစုအပါအ၀င် မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့ကို တရားဝင် ပြောဆိုထားသည်။
ယမန်နေ့က မောင်ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် မောင်ဇော်လင်းတို့၏ ပြစ်မှု လုံးဝ မကျူးလွန်ကြောင်းထွက်ဆိုချက်နှင့် ရဲစခန်းထွက်ဆိုချက် ကို တရားဝင်ရုပ်သိမ်းသည်စာအား ၄င်းတို့၏ မိဘများနှင့်အတူ မြန်မာသံရုံးအထူးအဖွဲ့တို့က ထိုင်းနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့် အရေးကော်မရှင်ထံ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှု ရရှိရေး အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး သံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်၊ အတွင်းဝန် ဦးထွန်းအေး အပါအဝင် သံရုံး အထူးစုံစမ်းရေး အဖွဲ့နှင့် မောင်ဝင်းဇော်ထွန်း၊ မောင်ဇော်လင်းတို့၏ မိဘများက လည်း အမှုကို တရားဝင် လိုက်ပါဆောင် ရွက်ခွင့်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီထံ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက အပ်နှင်း လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မောင်ဝင်းဇော်ထွန်းနှင့် မောင်ဇော်လင်းတို့ကို ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း Koh Tao ခေါ် လိပ်ကျွန်းပေါ်၌ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ လ ၁၅ ရက်က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား နှစ်ဦး အသတ်ခံခဲ့ရမှုတွင် တရားခံများအဖြစ် ထိုင်းရဲက စွပ်စွဲဖမ်းဆီးထားပြီး လူသတ်မှု၊ မုဒိန်းမှု၊ ပစ္စည်း လုယူမှု၊ တရားမဝင် ခိုးဝင်မှု၊ အမှုထိန်ချန်မှု များနှင့် စွဲဆိုထားသည်။
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင် ၁၃နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ကိုက်ခဲ့သည့် မြွေဆိပ်သည် ခြေထောက်တစ်ခုလုံးအား ညိုမည်းခြောက်သွေ့ ကာသစ်ကိုင်းခြောက်ကဲ့ သို့ ဖြစ်စေသွားစေသည်။
မြွေဆိပ်သည် ဆဲလ်များကို သေစေပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားများ ပျက်ဆီးရကာ အဆိပ်ပျံ့ ရာ တစ်လျှောက် အသားများ ယိုယွင်းပုပ်သိုးကာ သေဆုံးခြောက်သွေ့ သွားစေခြင်းဖြစ်သည်။
မြွေကိုက်ခံရသည့် မိန်းကလေးဖြစ်သူ မည်သူဆိုသူကို ထုတ်ဖော်ခြင်း မရှိသော်လည်း သစ်ကိုင်းကဲ့ သို့ ပုပ်သိုးခြောက်သွေ့ သွားသည့် ခြေထောက်ကို ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံကို ဆရာဝန်များက ရရှိ ခဲ့သည်။
`မြွေဆိပ်က အလွန်ကို ရှုပ်ထွေးတယ်။ မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး မြွေဆိပ်အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးပြောနိုင်တာက လူနာမိန်းကလေးရဲ့ ခြေထောက်တွေက ပျက်ဆီးသေဆုံး သွားပြီ။ ဖြတ်ပစ်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် လူပါသေဆုံးသွားမှာ ဖြစ်တယ်။“ဟု လီဗာပူးလ်ရှိ ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သည့် အရမ်ဂို့ ရ်ှကပြောသည်။
`ကလေးမလေးရဲ့ ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး မည်းခြောက်နေပြီ။ အဆိပ်ကလည်း ဆက်ပျံ့ နေ တယ်ဆိုတာ ကျန်ကိုယ်အပိုင်းတွေကို ကြည့်ရသိနိုင်တယ်။ မြွေဆိပ်က သူ့ ကြွက်သားတွေကို ဖျက်ဆီး ပစ်နေပြီ။ ကျန်ခြေထောက်ကလည်း ပိန်လှီနေတာ တွေ့ နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ပါသေဆုံးသွား ဖို့ များတယ်။“ဟု၎င်းက ပြောသည်။
နာမည်ကြီးကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်အမျိုးသမီးကို အိုင်အက်စ်တို့ ခေါင်းဖြတ်
အိုင်အက်စ်တို့ ကို တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ မှ အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ဦး ငြိမ်းချမ်းရေးအမှတ်အသားပြ လက်နှစ်ချောင်းထောင်ကာ ရိုက်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ တွစ်တာပေါ်တွင် ပျံ့ နှံ့ သွားခဲ့ပြီးနောက် ယင်းတပ်ဖွဲ့ ဝင်အမျိုးသမီးသည် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ အမျိုးသမီးအား အိုင်အက်စ်အဖွဲ့က ခေါင်းဖြတ်ကွပ်မျက်ခြင်းခံလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။
အမည်ဝှက်အရ ရီဟာနာဟုသိထားသည့်ကာ့ဒ်တပ်ဖွဲ့ ဝင်ယင်းအမျိုးသမီးသည်အိုင်အက်စ်တိုက်ခိုက်ရေးသမား၁၀၀ကိုတစ်ကိုယ် တည်း သုတ်သင်ထားနိုင်ခဲ့သူဟုသိရသည်။ ဆီးရီးယားနယ်စပ်မြို့ ကိုဘာနီအတွက် ယင်းအမျိုးသမီးက မျှော်လင့်ခြင်း သင်္ကေတ အဖြစ် သရုပ်ပြကာ ဂျာနယ်လစ်တစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရာတွင် လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်ထောင်ပြ သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမှတ် လက္ခဏာပြုကာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းပုံက တွစ်တာပေါ်ရောက်ရှိပျံ့ နှံ့ သွားခြင်းနှင့် အတူ အမျိုးသမီးလည်း လူသိ များခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါးဒေါ်လာသာကုန်မည့် ဆံပင်ညှပ်မှုပြုလုပ်ရာမှ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများကြောင့် ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ ကုန်ကျခဲ့ရသည့် စင်ကာပူအမျိုးသမီးကြီး၏ဖြစ်ရပ်
15:00 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး သည် နာမည်ကြီးအလှပြင်ဆိုင်တစ် ခုတွင် ငါးဒေါ်လာသာကုန်ကျမည့် ဆံပင်ညှပ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ ပေးခဲ့ရခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ဘတ်တီချိုင်သည် စင်ကာပူအ လယ်ပိုင်း Ang Mo Kio မြို့လယ်ရှိ New Station အလှပြင်ဆိုင်သို့သွား ရောက်ပြီး ဆံပင်ညှပ်ခဲ့သည်။ ဆံပင် ညှပ်ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းများကသူမ အား အခမဲ့ဦးရေစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပေး မည်ဟု ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ သူမကလက် ခံခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းများက သူမကိုဓာတ်ပုံများ ပြသကာ ''မစ္စချိုင်၏ဦးရေပြားသည် အလွန်အဆီပြန်ကာ ဆံသားများသည် လည်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ခြောက်သွေ့နေသည်ဟု ပြောသည်။ ထိုပုံစံမျိုးဖြင့် ချိုင်သည်မကြာမီအချိန် အတွင်း ဆံပင်များကိုဆုံးရှုံးရဖွယ်ရှိ သည်ဟုလည်း သတိပေးခဲ့သည်။ ထို သတိပေးမှုကြောင့် ထိတ်လန့်သွား သောချိုင်အား တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်လျှင် ၂၉၈ဒေါ်လာကုန်ကျမည့် ကုသမှုတစ် မျိုးရှိကြောင်းနှင့် ထိုကုသမှုအကြိမ် နှစ်ဆယ်အတွက် ဒေါ်လာ ၄ဝဝဝ သာယူပြီး သူမအားတစ်ကြိမ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ဝဝလျှော့ပေးမည်ဟုလည်း ဝန်ထမ်းက ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
တစ်လဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂ဝဝဝ ရှိသောချိုင်က ဈေးနှုန်းကြောင့်ကုသ မှုတစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်မည်ဟုပြော ကာ သူမ၏ခရတ်ဒစ်ကတ်ကိုပေးလိုက် သည်။
သို့သော်ဝန်ထမ်းက ၂၉၈ဒေါ် လာသာဖြတ်ယူမည့်အစား အကြိမ် နှစ်ဆယ်အတွက် ဒေါ်လာ ၄ဝဝဝကို တစ်ဆက်တည်းယူကာ ယခုကဲ့သို့ အကြိမ်နှစ်ဆယ်ကုသရန် လက်ခံခြင်း အတွက် ဝမ်းသာစကားပြောသည်။
မစ္စချိုင်ကမဟုတ်ဟု ငြင်းသော်လည်း ဝန်ထမ်းက ထိုသို့အကြိမ်နှစ်ဆယ်စာ အတွက် စာချုပ်ချုပ်ပြီးပြီဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင်ဆိုင်ဝန်ထမ်းက သူမအား ဒေါ်လာ ၅ဝဝတန် ဆံပင်အရောင်ဆိုး ခြင်းများ အခမဲ့ပြုလုပ်ပေးမည့် ဆံ သားကုသမှုအတွက် ဒေါ်လာ ၂ဝဝဝ တန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြန်သည်။ သို့သော်ချိုင်က ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ သာ ပေးခဲ့ကာ ဒေါ်လာ ၅ဝဝ တန်အခမဲ့ ခံစားခွင့်ကို အဆုံးရှုံးခံလိုက်ရသည်။
ထို့ကြောင့် ချိုင်၏သားဖြစ်သူ က စင်ကာပူစားသုံးသူအဖွဲ့အစည်း သို့ မိခင်၏ဒေါ်လာ ၅ဝဝဝ ပြန်ရလို မှုဖြင့်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး ၄င်း၏တိုင်ကြား မှုက ကိုးလအတွင်း New Station ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ (၂၂) ကြိမ်မြောက် တိုင်ကြားမှုဖြစ်သည်။
သို့သော် Ang Mo Kio မြို့ရှိ New Station ဆိုင်မှ မန်နေဂျာက ၄င်းတို့ဝန်ထမ်းများသည် ထိုသို့ ဖောက် သည်များကို အတင်းအကျပ်စာချုပ် ချုပ်ခိုင်းခြင်းမရှိကြောင်းသာ ငြင်းဆို ခဲ့ပြီး ကျန်အကြောင်းအရာများကို ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိဟု သိရသည်။
Ref;The New Paper
စစ်ဆင်ရေး အသုံးစရိတ် ယခုနှစ်အတွင်း ကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဘီလီယံခန့် သာရှိ
(၆၉)နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်အတူတွေ့ရသည့် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးသုံး စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ (ဓာတ်ပုံ − လင်းဘိုဘို/အီးပီအေ)
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ စစ်ဆင်ရေးစရိတ်အတွက် အသုံးပြုသည့် ငွေပမာဏမှာ ယခုနှစ် အတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ် ဘီလီယံခန်သာ့ရှိကြောင်း ကာကွယ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၀န်ကြီး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းသည် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၃ ဘီလီယံကျော်ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့အနက်မှ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို စစ်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနေကြောင်း ၀န်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က ၂၀၁၄−၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာငွေ တောင်းခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းရာတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးဌာန၏ အသုံးစရိတ် များတွင် စစ်ဆင်ရေး၊ တိုက်ခိုက် ရေးအတွက် အသုံးပြုမှုမှာ ၃၀ ရာ ခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိပြီး ကျန်ရှိသည့် အသုံးစရိတ်များမှာ လစာနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေ လွင်က အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံ တော်ကို ပြည်တွင်းပြည်ပ အန္တ ရာယ်များမှ ကာကွယ်ရာတွင် တပ်မတော်က ဦးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါတာဝန်များထမ်း ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကာကွယ် ရေးအသုံးစရိတ်တင်ပြတောင်းခံ ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စဉ်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိဟု ယုံကြည်ကြောင်းလည်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးဝေလွင်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အသုံးစရိတ်သည် ပြည်ထောင်စု အသုံးစရိတ်အားလုံး၏ ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသဖြင့် ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာငွေတောင်းခံမှုမှာ များနေကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါဝေဖန်မှုများအပေါ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြန် လည်ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တပ် မတော်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ငန်းစဉ်နှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်များ မဖောက်ဖျက်ရန် မူဝါဒ ခြောက်ခုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု လည်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံး ဗိုင်းရပ်စ် ကိုးမျိုး
13:00 ဗဟုသုတ No comments
ကြောက်မက်ဖွယ် အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက် ပြန့်ပွားမှုနဲ့ လူသေဆုံးမှုနှုန်း တွေကို ကြားသိနေရတဲ့ အခါ အီဘိုလာဟာ HIV ထက်တောင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ လူထု စကားသံ တွေကို ကြားလာ ရပါတယ်။ အီဘိုလာဟာ HIV ထက် တကယ်ပဲ ဆိုးရွားသလား။ လူသားမျိုးနွယ်စု တွေလဲ ဒိုင်နိုဆော တွေလိုပဲ မျိုးသုဉ်း သွားမလားလို့ တွေးပူရတဲ့ အထိ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ဘယ်နှမျိုး ရှိတယ်ဆိုတာ သိချင်လာ ကြတယ်။
Marburg Virus ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ တွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ ဓာတ်ခွဲခန်းတွေမှာ အသုံးပြုဖို့ ယူဂန်ဒါ နိုင်ငံကနေ တင်သွင်းလာတဲ့ မျောက်တွေက တစ်ဆင့် ဓာတ်ခွဲခန်း လုပ်သားတွေကို ကူးစက်ခဲ့ ပါတယ်။ အီဘိုလာ လိုပဲ အဖျားတက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ဒွာရပေါက် တွေကနေ သွေးယိုစီး ပြီးတော့ သေစေ နိုင်ပါတယ်။ ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ သေဆုံးမှုနှုန်း ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၈- ၂ဝဝဝ ရာသီမှာ ကွန်ဂိုနိုင်ငံ က ခံစားခဲ့ရတဲ့ Marbug Virus ကူးစက်မှုမှာ သေဆုံးမှုနှုန်း ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၅ ခုနှစ် ရာသီမှာ အင်ဂိုလာ နိုင်ငံက ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကူးစက်မှုမှာလဲ သေဆုံးမှုနှုန်း ဟာ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်း အောက်မကျ ခဲ့ပါဘူး။
Ebola Virus ကို ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ ဆူဒန်နဲ့ ကွန်ဂိုနိုင်ငံ တွေမှာ ပထမဆုံး တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရ သူရဲ့ သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ် အရည်၊ အသားတစ်သျှူး တစ်ခုခု နဲ့ ထိတွေ့မိ လိုက်တာနဲ့ ကူးပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ သန္ဓေဗီဇ အပေါ်မူတည်ပြီး သေစေနိုင်မှုနှုန်း ကွာခြားပါတယ်။ Ebola Reston ဗိုင်းရပ်စ်က လူကို ဖျားတောင် မဖျားစေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Ebola Bundibugyo ကတော့ သေစေနိုင်မှု နှုန်း ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး အခြားနိုင်ငံ တွေထက် ဆူဒန်နိုင်မှာ သေစေနိုင်မှုနှုန်း ပိုနေခဲ့ပြီး ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ အနောက် အာဖရိက နိုင်ငံတွေမှာ ကူးစက် ပြန့်ပွားနေတဲ့ Ebola Zaire ဟာ အပြင်းဆုံးဖြစ်ပြီး သေစေနိုင်မှုနှုန်း ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Rabies ခေါ် ခွေးရူးရောဂါပိုး ကာကွယ်ဆေး ကို ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ထုတ်လုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး တိရစ္ဆာ န် တွေကို ထိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် အခုဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခွေးရူးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အင်မတန် ရှားပါး သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ အာဖရိကတိုက် အချို့နေရာတွေ မှာတော့ ခွေးရူးရောဂါပိုး ကူးစက်မှုဟာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာတစ်ခု အဖြစ် ကျန်ရစ် နေဆဲပါ။ ခွေးရူးရောဂါပိုး ဟာ ဦးနှောက်ကို ဖျက်ဆီးပါတယ်။ ခွေးရူးရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ ထားရတဲ့ တိရစ္ဆာ န် တစ်ကောင်ကောင် ကိုက်တာခံရရင် ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ ရှိသလို ကာကွယ်ဆေးလဲ ရှိပါတယ်။ အချိန်မီ ဆေးကုသမှု မခံယူဘူး ဆိုရင်တော့ သေရန် ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါတယ်။
HIV ဟာ အခုအချိန် အထိမှာ လူသေစေ နိုင်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးပါ။ ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်မှာ စတင် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကနေ ဒီနေ့အထိ မှာ HIV ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ ၃၆ သန်းခန့် ရှိနေပါပြီ။ HIV ကူးစက်ခံထား ရသူတွေ နှစ်ပေါင်း များစွာ အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အားပြင်းတဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ် ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ မိသားစု တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေဟာ အနိမ့်ဆုံး အဆင့် ဒါမှမဟုတ် အလယ်အလတ် အဆင့်သာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ HIV ကူးစက်မှုနှုန်း ဟာ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပါ သေးတယ်။ အာဖရိက၊ ဆာဟာရဒေသ မှာဆိုရင် အရွယ်ရောက်သူ ဦးရေ ၂ဝ မှာ တစ်ဦးဟာ HIV ကူးစက်ခံထား ရပါတယ်။
Smallpox ကျောက်ကြီးရောဂါ ကင်းစင်တဲ့ ကမ္ဘာမြေ ဖြစ်သွားပြီလို့ WHO က ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူသား မျိုးနွယ်စုကြီး ဟာ ကျောက်ကြီး ရောဂါဒဏ်ကို နှစ်ပေါင်း ထောင်နဲ့ချီ ခံစားခဲ့ကြ ရတာပါ။ သေစေနိုင်မှု နှုန်းကတော့ သုံးယောက်၊ တစ်ယောက်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ မသေဘဲ ကျန်ခဲ့သူတွေ မှာလဲ သေရာပါ အမာရွတ်ကြီးတွေ စွဲကျန်ခဲ့ပြီး အများစုက မျက်လုံးပါ ကွယ်ခဲ့ရတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ဥရောပ သုတေသန ပညာရှင်တွေ ဝင်ရောက် လာရာကနေ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မှာ ကျောက်ကြီး ရောဂါပိုး ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်။ ၂ဝ ရာစု တစ်ခုတည်းမှာကို ကျောက်ကြီး ရောဂါ ကြောင့် သေဆုံးသူ သန်း ၃ဝဝ ရှိခဲ့ ပါတယ်။
Hanta Virus ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ် ကိုရီးယားစစ်ပွဲ ကာလမှာ ပလိပ်ရောဂါပိုး စတင်ပြန့်ပွား ခဲ့ပါတယ်။ လူလူချင်း ကူးစက်တာ မဟုတ်ဘဲ ကြွက်ချေးနဲ့ ထိတွေ့မိရာ ကနေ ကူးစက်လေ့ရှိတဲ့ ပလိပ်ရောဂါ ဆိုးကြောင့် အဲဒီတုန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင် ဦးရေ ၃ဝဝဝ လောက် ကူးစက်ခံ ခဲ့ရပြီး ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့ ရတယ်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာတော့ ပလိပ်ရောဂါပိုး နောက်တစ်မျိုးကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မှာ တွေ့ရှိခဲ့ ပါတယ်။ လူဦးရေ ၆ဝဝ လောက်ကို ကူးစက်ခဲ့ပြီး ၃၆ ရာခိုင်နှုန်း သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်။
Influenza တုပ်ကွေးရာသီ ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းမှာ လူဦးရေ ငါးသိန်းလောက် ဖျားနာကြ ပါတယ်။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးရဲ့ သန္ဓေဗီဇ ကလဲ မတူတဲ့အတွက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးရလေ့ ရှိပါတယ်။ ၁၉၁၈ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စပိန် တုပ်ကွေးဟာ သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ လူဦးရေရဲ့ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ကူးစက်ခဲ့ပြီး လူဦးရေ သန်း ၅ဝ ခန့် သေဆုံးခဲ့ ပါတယ်။ ဒီတုပ်ကွေးမျိုး နောက်ထပ် တစ်ခါ ဖြစ်ပွားခဲ့မယ် ဆိုရင် ထိန်းချုပ်ဖို့ လွယ်မှာ မဟုတ်ဘဲ လူသားတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ သေချာတော့ မှာတောင် မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူ များက ပြောပါတယ်။
Dengue သွေးလွန် တုပ်ကွေး ရောဂါပိုးကို ၁၉၅ဝ ပြည့်နှစ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တို့မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ရှိ ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့ လူဦးရေ ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဟာ သွေးလွန် တုပ်ကွေးဇုန်မှာ နေထိုင်ကြ တာပါ။ ခြင်ကနေ အဓိက ကူးစက်လေ့ရှိပြီး ပူနွေးလာ နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်မှု နှုန်းဟာ ပိုမြန်လာဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက်ခံရသူ သန်း ၅ဝ ကနေ သန်း ၁ဝဝ အထိ ရှိပေမယ့် သေဆုံးမှုနှုန်း ကတော့ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ်။ သွေးယိုစိမ့်မှု စတင်တဲ့အခါ အချိန်မီ မကုသ နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ သေဆုံးမှုနှုန်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အတွက် ကာကွယ်ဆေး မရှိသေး ပါဘူး။ ပြင်သစ် ဆေးဝါး ကုမ္ပဏီ Sanofi က ထုတ်လုပ်တဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ဟာလဲ စမ်းသပ်အဆင့် မှာပဲ ရှိသေးပေမယ့် အထိုးခံထား သူတွေမှာတော့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကူးစက် ခံရတာမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
Rota virus ကာလ ဝမ်းရောဂါပိုး ဟာ မွေးကင်းစနဲ့ ကလေးငယ် တွေကို ဆိုးရွားစွာ တိုက်ခိုက်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဝမ်းသွားထားတဲ့ အညစ်အကြေး တွေက တစ်နည်းနည်းနဲ့ ခံတွင်းထဲ ပြန်ရောက် သွားတဲ့အခါ ကာလဝမ်း ရောဂါ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါတယ်။ အရည်ဓာတ် ခန်းခြောက်မှုကို ချက်ချင်း မဖြည့်နိုင်ဘူး ဆိုရင် သေဆုံးနိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှာ ကာလဝမ်း ရောဂါ ကြောင့် အသက် ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ် ဦးရေ ၄၅၃ဝဝဝ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အခု နောက်ပိုင်းတော့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ထွက်လာပြီမို့ ကာလဝမ်း ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသမှု ခံယူရတဲ့နှုန်း သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားပြီး သေဆုံးမှုနှုန်း လဲ ခေါက်ချိုး ကျသွား ပါတယ်။
အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကိုးမျိုးမှာ ဘယ် ဗိုင်းရပ်စ်က လူကို သေစေနိုင်မှု အမြင့်ဆုံးလဲ ဆိုတာ စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင်ပဲ ချိန်ဆကြည့်ပါ။ သေချာတာ ကတော့ ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ လူသေဆုံးမှု ရှိလာ နိုင်တဲ့အတွက် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံ ရမှုကနေ ကင်းဝေးနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေး အသိနဲ့ သတိရှိစေဖို့ အခုလို လေ့လာ ရေးသား တင်ပြလိုက် ရပါတယ်။
ထောင် ၁၅ နှစ်ကျလည်း ကျပါစေဟု ဆိုကာ ၁၆ နှစ်သမီးလေးကို ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း မုဒိန်းကျင့်သူ
12:00 မုဒိန်း မှုများ No comments
ဗြိတိန် နိုင်ငံက လူငယ် တစ်ဦးသည် ၁၆ နှစ်ရွယ် မိန်းမပျိုလေး တစ်ဦးကို သားမယား အဖြစ် အကြိမ်ကြိမ် ပြုကျင့် နေခဲ့ရာ ငါးကြိမ်မြောက် သားမယား ပြုကျင့် ချိန်တွင် မိန်းကလေးက ဖုန်းဖြင့် တိတ်တခိုး မှတ်တမ်းတင် ထားခဲ့ နိုင်ခြင်းကြောင့် ၎င်းကို ထောင်ဒဏ် ဆယ့်နှစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ် နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လူငယ်သည် အဓမ္မပြုကျင့်သည့် နောက်ဆုံး အကြိမ်တွင် “ထောင် ၁၅ နှစ် ကျရင်ကျပါစေ” ဟုပင် ပြော ဆိုခဲ့ပြီး မိန်းကလေးကို အကြမ်းပတမ်း ကျူးလွန်ခဲ့သေးသည်။
“ပြုကျင့် ခံရတဲ့ မိန်းကလေးက ကိုးလ်ခေါ်တဲ့ နေရာကို လာဖို့ လက်ခံ လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သူ့ အမေရဲ့ ဖုန်းကိုပါ တစ်ပါတည်း ယူသွား ခဲ့ပြီး ခုလို လက်ပူး လက်ကြပ် ဝန်ခံနိုင်အောင် မှတ်တမ်း ယူလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်”ဟု ရှေ့ နေ တွမ်စကိုဖီးကပြောသည်။
ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ကို ကော့စမွေထောင်မှာ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြုံးရွှင်စွာ တွေ့ရသည့် မိဘဆွေမျိုးများ (ဓာတ်ပုံ – ကျော်ခ / ဧရာဝတီ)
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှု သံသယ တရားခံတွေအဖြစ် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ကို တွေ့ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ လိုက်လာကြတဲ့ မိဘတွေနဲ့ အတူ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးက အထူးအဖွဲ့တို့ဟာ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်ကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
ထိုင်းကို ရောက်လာကြတဲ့ မိဘဆွေမျိုးတွေကတော့ ဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့မိဘတွေ ဖြစ်တဲ့ ဦးထွန်းထွန်းထိုက်နဲ့ ဒေါ်မေသိန်း၊ ဇော်လင်းရဲ့ မိခင် ဒေါ်ဖြူချေနုနဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးသိန်းရွှေအောင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သူတို့အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေမှာ တက်ကြွတောက်ပမှုတွေ ကင်းနေပြီး ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ဆီကနေ တခုခုကို မျှော်လင့်နေကြဟန်က မျက်နှာတွေပေါ်မှာ အထင်းသား။ သားဇောနဲ့ အပူမီးတောက်နေတဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့ မိခင် ဒေါ်မေသိန်းကတော့ မတိတ်နိုင်သေးတဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့အတူ သားရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲကို လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။
တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိပြီး ပြန်ထွက်လာချိန်မှာတော့ သူတို့အားလုံးရဲ့ မျက်နှာတွေက ဝင်သွားတုန်းကနဲ့ မတူဘဲ ဖုံးဖိမထားနိုင်လောက်အောင် အပြုံးတွေက ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ပြန်ထွက်လာတဲ့ တဖွဲ့လုံးမှာ အသိသာ အထင်ရှားဆုံး နှစ်ယောက်ကတော့ မိခင်တွေဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မေသိန်းနဲ့ ဒေါ်ဖြူချေနုတို့ပါ။ သူတို့မျက်ဝန်းတွေက တောက်ပပြီး မျက်နှာတွေမှာလည်း တပြုံးပြုံးနဲ့ပါ။
မျက်ရည်တွေ မခြောက်သေးဘဲ အကျဉ်းထောင်ထဲကို ဝင်သွားခဲ့တဲ့ ဒေါ်မေသိန်း ဆိုရင် ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ လိုချင်တာရလာတဲ့ ကလေးတယောက်ရဲ့ အပြုံးမျိုးနဲ့ ဖျတ်လတ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ထွက်လာပါတယ်။ အရင်က ငူငူငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေပေမယ့် အခု ကလေးတယောက်လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပါပဲ။
အခြေအနေတွေကို သိလိုဇောနဲ့ စောင့်ကြိုနေတဲ့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေကိုတော့ ဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့ ဖခင် ဦးထွန်းထွန်းထိုက်က တက်တက်ကြွကြွ ဖြေပါတယ်။ သူတို့တွေ အကျဉ်းထောင်ထဲကို ဝင်သွားပြီး ပြန်ထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ခိုင်မာစေတဲ့ ခွန်အားတခု ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သားဖြစ်သူတွေ နှုတ်ဖျားကနေ ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့်ပါ။
“ကျနော့်သားကလည်း သူမဟုတ်ကြောင်း၊ သူ့ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်လို့ ဝန်ခံရပါတယ်ဆိုကြောင်းကို ကျနော်တို့ကို ပြောလိုက်လို့ ကျနော်တို့ ဒီနေ့ ပျော်ပါတယ်ခင်ဗျား၊ ပျော်ပါတယ်” ဆိုပြီး သတင်းမီဒီယာတွေကို ဖြေဆိုရင်း ပီတိ မျက်ရည်တွေ စီးကျနေတဲ့ ဦးထွန်းထွန်းထိုက်က လက်မထောင် ကြွေးကြော်လိုက် ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့ အကျဉ်းထောင်အတွင်းကို ဝင်သွားချိန်မှာ ပထမဆုံး တွေ့ရသူကတော့ မိဘနဲ့ ၆ နှစ်ကျော်အကြာ ဝေးကွာနေခဲ့ရတဲ့ ဇော်လင်းပါ။ ဆေးစစ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး ပြန်လာတဲ့ ဇော်လင်းကိုတွေ့တော့ မိခင် ဒေါ်ဖြူချေနု တချိန်လုံး ထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့ မျက်ရည်တွေ မဆည်နိုင်တော့ဘဲ သားဖြစ်သူကို ဖက်ပြီးငိုချလိုက်ပါတယ်။
သံခြေကျင်းတွေ ခတ်ထားတဲ့ ဇော်လင်းလည်း ငိုကြွေးရင်းကနေ “အမေ၊ မငိုနဲ့၊ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်။ သားအတွက် ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့၊ တရားရုံးက မေးလာရင် သားတို့ အမှန်အတိုင်း ထွက်ဆိုတော့မယ်” ဆိုပြီး ဇော်လင်းက မိခင်ဖြစ်သူကို အားပေးလိုက်တယ်လို့ ဒေါ်ဖြူချေနုက ရခိုင်သံဝဲဝဲနဲ့ ပြန်ရှင်းပြပါတယ်။
ဇော်လင်းတို့ မိသားစုတွေ ငိုကြွေးနေတုန်းမှာပဲ သူတို့ ထိုင်နေတဲ့နေရာကို သံခြေကျင်းတွေ ခတ်ထားတဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်း ရောက်လာပါတယ်။ သားဖြစ်သူသတင်း ကြားကတည်းက တချိန်လုံး သောကမီးတွေ တောက်လောင်နေခဲ့ရတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေသိန်းနဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးထွန်းထွန်းထိုက်တို့ဟာ ဝင်းဇော်ထွန်းအဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ငိုကြွေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဝင်းဇော်ထွန်းက လုံးဝ မျက်ရည်မကျဘူး။ စိတ်ခိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ ငိုနေတဲ့ နှစ်ယောက်ကိုတောင် သူက ပြန်နှစ်သိမ့်တယ်။ အဖေတို့ အမေတို့ မငိုကြဖို့ပေါ့ဗျာ။ သားလည်း ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေတယ်။ သူ့အတွက်မပူဖို့ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပဲ ဂရုစိုက်ဖို့ပေါ” လို့ ဦးထွန်းထွန်းထိုက်က ပြန်ပြောပြပါတယ်။
မိသားစုတွေ ငိုကြွေးနှစ်သိမ့်နေကြချိန်မှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေကြသူတွေက သံရုံးက လွှတ်လိုက်တဲ့ အထူးအဖွဲ့တွေပါ။ သူတို့တွေစိုးရိမ်နေတာက လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရင်တခေါက်က တွေ့ဆုံခွင့်ရချိန်မှာ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့နှစ်ဦးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့အပေါ် ဒီတခေါက်ရော ဘယ်လိုပြောမလဲ ဆိုတာကို သူတို့ တဖွဲ့လုံး စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာပါ။
“ကျနော်ဆိုရင် စိတ်တွေ ဆောက်တည်ရာမရဘူး။ သူတို့ ဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကို မစောင့်နိုင်လောက်အောင် တော်တော်လေး စိတ်ပူနေတာ။ သူတို့ကိုယ်တိုင် သတ်တယ်လို့ ရဲကို ဝန်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ ကျနော်က မယုံကြည်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ။ ကျနော်တို့ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ တရားရုံးမှာတွေ့တုန်းက သူ့တို့ကို ကတိတောင်းဖူးတယ်။ မင်းတို့ မိဘတွေကို ခေါ်လာပေးရင် မင်းတို့ အမှန်တိုင်း ဝန်ခံမလားဆိုတော့ ပြောမယ်လို့ ဝင်းဇော်ထွန်းက ပြောတယ်။ အခုရောက်လာတော့ သူတို့ ပြောမယ်ဆိုတဲ့ အမှန်အတိုင်းဆိုတာက ဘာလဲဆိုပြီး တွေးပူနေတာ” လို့ သံရုံး အထူးအဖွဲ့ရဲ့ စကားပြန် ကိုမိုးဝေက သူ့ရဲ့စိတ်ပူပင်မှုကို ပြန်ပြောပြပါတယ်။
သံရုံးအဖွဲ့က အခင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းချိန်မှာတော့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့က ဗြိတိသျှနှစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်မှု၊ အဓမ္မ ပြုကျင့်မှုတွေမှာ သူတို့ လုံးဝ မပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့် ဝန်ခံပေးခဲ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း မိဘတွေရှေ့မှောက်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပြီး သူတို့နှစ်ဦးလုံး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ငရဲခန်းရဲ့ အသေးစိတ်ကိုလည်း မေးသမျှရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဝင်းဇော်ထွန်းကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးချိန်မှာ ထိုင်းရဲနဲ့ စကားပြန် ကိုရဲတို့က မျက်နှာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရိုက်နှက် ကန်ကျောက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ စကားပြန် ကိုရဲက မြန်မာသံရုံးက ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ကဒ်ပြားကို ထုတ်ပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “လူသတ်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု မဝန်ခံပါက၊ ခြေလက်များကို ဖြတ်ပြီး ဂုန်နီအိတ်ထဲထည့်ကာ မြစ်ထဲ မျှောပစ်မည်။ ကားတာယာကွင်းများနှင့် ပတ်ပြီးရေနံဆီလောင်းကာ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့” တဲ့ အကြောင်း ဝင်းဇော်ထွန်း ကိုယ်တိုင် သံရုံးအဖွဲ့ကို ရှင်းပြထားတဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ မေးမြန်းခဲ့သလို လူသတ်တရားခံဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံပေးလိုက်ရင် ထောင် လေး၊ ငါးနှစ်သာ ကျနိုင်ကြောင်း ဖျားယောင်းသိမ်းသွင်း ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိတဲ့အကြောင်း သံရုံးအထူး အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ မိဘတွေကို ဝင်းဇော်ထွန်းက ရှင်းပြ ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တခါ ဇော်လင်းကိုလည်း “ဘီယာသွားဝယ်တဲ့ CCTV က ပုံတွေကိုပြပြီး မင်းတို့ မဟုတ်လားလို့ မေးတယ်။ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ သတ်တာလဲ မင်းတို့ပဲဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်နှိပ်စက် ထိုးနှက်ပါတယ်” လို့ ဇော်လင်း ကိုယ်တိုင် ရှင်းပြထားတဲ့ သံရုံးအဖွဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။
“မျက်နှာကို စွပ်ထားတဲ့ အ၀တ်ပိတ်ကို ပါးစပ်ပေါ်အောင်လှန်ပြီး မျက်နှာကိုမမြင်ရ၊ မြန်မာတယောက် ဘယ်သူမှန်းမသိဘူး ထမင်းလာကျွေးတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ စကားပြန်ဝင်လာတယ်။ မင်းသတ်လား အမှန်အတိုင်းပြော၊ မပြောရင် မင်းတို့ ဒီထက်နာမယ်။ မင်းတို့သွားတွေကို ပလာယာနဲ့ နုတ်ပစ်မယ်။ မျက်နှာကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်တယ်။ ဒီမှာ လူသတ်တဲ့ပုံစံ သိတယ်မဟုတ်လား၊ တပိုင်းစီပိုင်းပြီး အင်္ဂတေနဲ့လောင်း ရေထဲမြှုပ်ပစ်လိုက်မယ်၊ ၀န်ခံရင်တော့ မင်းတို့ သက်သာမယ်။ ငါတို့လည်း ကူပေးမယ် ဆိုပြီးပြောပါတယ်” လို့ ခြိမ်းခြောက် ထွက်ဆိုခိုင်းတဲ့အကြောင်း ဇော်လင်းကို မေးမြန်းထားတဲ့ မှတ်တမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဇော်လင်းရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ထဲမှာ “နောက်တရက်လည်း အဲဒီမှာပဲထားပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်။ မင်းတို့ဟာ တရားဝင် လာနေတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ အချိန်မရွေးသတ်ပြီး ကျောက်တုံးနဲ့ တွဲမြုပ်လိုက်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ၀န်ခံစေပါတယ်။ ပေါက်တူးနဲ့ရိုက်ပြီး သတ်တယ်လို့ ပြောစေပါတယ်” လို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အခင်းဖြစ်တဲ့ ညက ဇော်လင်း၊ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ မောင်မောင်တို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်ဟာ စတိုးဆိုင်မှာ ဘီယာသွားဝယ်ပြီး ကမ်းစပ်သောင်ပြင်မှာ ဘီယာနဲ့ လက်ကျန်ဝိုင်ကို သောက်ခဲ့ကြပြီး
မောင်မောင်ကတော့ စောစောပြန်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျန်နေတဲ့အချိန်မှာ ဘီယာသောက် သီချင်းဆိုပြီး ကမ်းစပ်မှာ ရေကူးပြီးနောက် အိမ်ကိုပြန်အိပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လစာမထုတ်ခင် တရက်အလိုမှာ အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အတွက် လစာတောင် မထုတ်လိုက်ရဘူးလို့ ဇော်လင်းက ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခင်းဖြစ်စဉ်မှာ သေဆုံးသူကို ဝိုင်ပုလင်းနဲ့ ရိုက်တယ်။ ပေါက်ပြားနဲ့ ရိုက်တယ် ဆိုတာတွေကလည်း ခြိမ်းခြောက်ပြီး လိမ်လည်ထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မိဘတွေနဲ့ သံရုံး အထူးအဖွဲ့တွေရဲ့ရှေ့မှာ သူတို့လေးလေးနက်နက် ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ကြတာက “ဒီအမှုမှာ သူတို့နှစ်ယောက် လုံးဝ ပတ်သက်မှု မရှိဘူး” ဆိုတာပါပဲ။ ဒီစကားကြောင့် မိဘတွေနဲ့ သံရုံး အထူးအဖွဲ့တွေ စိတ်အေးသွားခဲ့ကြရပြီး ရှေ့ဆက် လုပ်ကိုင်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
“ကလေးတွေအနေနဲ့ အခုလိုမျိုး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောလာတာကို အင်မတန်မှကို ကြိုဆိုတယ်။ သူတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ်မှာထားတဲ့ သတ္တိကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့ သူတွေအနေနဲ့လည်း အင်မတန်မှ ဝမ်းသာတယ်။ သူတို့ဘက်ကလိုက်ပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ့နေများကောင်စီ အတွက်လည်း ပိုပြီးတော့ လုပ်ရကိုင်ရတာလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့သွားမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်” လို့ သံရုံး အထူးအဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးထူးချစ်က ရှင်းပြပါတယ်။
မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့ဝင် တခြားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းဦးကလည်း “ကျနော်တို့ မနားမနေကြိုးစားခဲ့တာတွေ ဒီနေ့ ကြိုးစားရကျိုး နပ်တဲ့နေ့ပဲ။ ကျေနပ်တယ်ဗျာ။ အစတုန်းက သူတို့ခြိမ်းခြောက် ခံရမှုတွေ လွှမ်းမိုးနေပြီး ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကိုတောင် မယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ဒါကြောင့် အရင်တခေါက်က ကျနော်တို့ သွားမေးတော့ သူတို့ အမှန်အတိုင်း မဝန်ခံခဲ့တာ။ အခုမိဘတွေပါလာမှပဲ ထုတ်ပြောပြတော့တာ” လို့ ဝမ်းသာအားရ ရှင်းပြပါတယ်။
ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ကို လူသတ်တရားခံလို့ ထိုင်းရဲတွေက ထုတ်ပြချိန်ကတည်းက ထိုင်းပြည်သူတွေ၊ မှုခင်းပညာရှင်တွေနဲ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေက အယုံအကြည် မရှိခဲ့ကြဘဲ ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလားတူ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ့အရေး ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကလည်း အယုံအကြည် မရှိကြပါဘူး။
တကမ္ဘာလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ဒီလူသတ်မှုမှာ သူတို့နှစ်ဦး တရားခံ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်နေမှုတွေဟာ အပြင်မှာတင် မဟုတ်ဘဲ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ အကြောင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အကျဉ်းကျနေတဲ့ မြန်မာအကျဉ်းသားတွေကလည်း မယုံကြည်ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ထောင်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ နှစ်ဦးကို မြန်မာအကျဉ်းသားတွေက အားမငယ်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့နဲ့ သူတို့တွေရှိနေကြောင်း စိတ်ဓာတ်တွေ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ သူတို့နှစ်ဦး ပြောပြချက်တွေအရ ပြန်သိရပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စိတ်ဓာတ် မကျအောင် အချိန်တိုင်း အားပေးနေတဲ့ အထဲမှာ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်က တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ နှစ်ဦး ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်ကို ရောက်ရှိလာချိန်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားနိုင်တဲ့ အတွက် စောင့်ကြည့်နေရကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ဆေးရုံတင်ရကြောင်း စတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့တာဟာ သတင်းမှားတွေဖြစ်ပြီး ဒီအပေါ်မှာ ထောင်မှူးကြီးက စိတ်ပျက်မိတဲ့အကြောင်း မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့တွေကို ညည်းညူလိုက်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကော့စမွေအကျဉ်းထောင်ထဲမှာ တွေ့ဆုံနေတဲ့အချိန် ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့
ပေးလိုက်တဲ့ ဖြောင့်ချက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ မိဘတွေအတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်သွားစေသလို ဒီအမှုကို မြန်မာအစိုးရဘက်ကနေ လိုက်ပါစုံစမ်းပေးနေတဲ့ မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့အတွက်လည်း ခွန်အားတွေဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
“အန်ကယ်တို့ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဆောင်ရွက်ရကျိုး နပ်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ချန်ထားတယ် ဆိုတာကတော့ သူတို့အမှုတွဲ မပိတ်မချင်းက တရားခွင်မှာ အန်ကယ်တို့ ရှင်းရဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင် ပြစ်ဒဏ်ကြီးတဲ့ ဒီလိုပြစ်မှုကြီးတွေမှာ အမှုတွဲတည်ဆောက်တဲ့လူဟာ ပေါ့ပေါ့တန်တန် တည်ဆောက် ပြီးတော့ တရားခံကို အပြစ်ပေးလို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ တရားခံသည် သံသယအကျိုးကို ခံစားရမယ်ဆိုတာ ဥပဒေမှာရှိတယ်။ ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မှာ” လို့ သံရုံး အထူးအဖွဲ့ရဲ့ ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့်က ပြောပါတယ်။
ဇော်လင်းနဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းတို့က ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝ ပတ်သက်မှု မရှိကြောင်း ပြောဆိုလိုက်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာသံရုံး အဖွဲ့ဟာ နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သက်ဆိုင်ရာ ကော့စမွေမြို့နယ် တရားသူကြီးရုံးမှာ ကန့်ကွက်လွှာ တင်လိုက်သလို ၄ ရက်အကြာမှာ ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ တရားရုံးချုပ်မှာလည်း ကန့်ကွက်လွှာ ထပ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို လူသတ်တရားခံအဖြစ် သံသယနဲ့ စွပ်စွဲပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က အမှုဖွင့်ထားတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့အနေနဲ့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။
“ဒီအမှုက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ မှားယွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် ထိုင်း၊ မြန်မာနဲ့ ဗြိတိန်တို့ ၃ နိုင်ငံအကြားမှာ နစ်နာစရာတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဥပဒေအတိုင်း မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင် အဆုံးအထိ လုပ်မှာပါ” လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်ကလည်း ပြောပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း လိပ်ကျွန်းပေါ်က ဗြိတိန်နိုင်ငံသား နှစ်ဦး အသတ်ခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ၊ နှိပ်စက်မှုတွေ၊ ဖျားယောင်းမှုတွေနဲ့ လူသတ်တရားခံအဖြစ် ဝန်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ရဲ့ ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်တွေဟာ အမှုတခုလုံးကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ဝန်ခံချက်ဟာ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ထိုင်းဥပဒေပညာရှင်တွေ၊ မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့တွေ အတွက် အရေးပါတဲ့ အထောက်အကူဖြစ်သလို စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့ ထိုင်း-မြန်မာပြည်သူတွေ
အထူးသဖြင့် သားဖြစ်သူ ဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့ သတင်းကိုကြားကတည်းက မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဘဲ သားဇောနဲ့ အိမ်ပေါ်က ခုန်ချပြီး ကိုယ့်ခေါင်းကို ခဲနဲ့ ထုနှက်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်မေသိန်း တယောက်လည်း သားဖြစ်သူနဲ့ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်မှာတွေ့ပြီး ပြန်ထွက်လာ ကတည်းက အပြုံးမပျက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်မှာ တွေ့ခွင့်ရတုန်းက သားဖြစ်သူ အနားမှာထိုင်ပြီး တချိန်လုံး ဖက်တွယ်နေတဲ့ ဒေါ်မေသိန်း က “သတင်းကြားရတဲ့နေကတော့ သားလေးကို ဘာလုပ်လိုက်ကြမလဲလို့ စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့။ ဒီအမှုမှာ လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်မှု မရှိဘူးလို့ ဒီနေ့ သားက သူပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ပြောပြလိုက်တဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ လုံးဝပေါ့သွားတယ်။ သား ပြန်လွတ်လာမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ယုံကြည်သွားတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
တပ်မတော် တောင်းခံငွေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် သုံးစွဲသည်ဟု ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှင်းပြ
လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ဘဏ္ဍာငွေ အသုံးစရိတ်များထဲမှ သုံးပုံတစ်ပုံကိုသာ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် တပ်မတော်က သုံးစွဲနေကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင်က ပြောသည်။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းတွင် တပ်မတော်က တောင်းခံထားသော အသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် ၎င်းက ယင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုက်ခိုက်ရေး အသုံးစရိတ်မှအပ ကျန်ရှိသည့် ကုန်ကျငွေ အသုံးစရိတ်များမှာ တပ်မတော်သားများအတွက် လစာ၊ စရိတ်နှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်က ဆိုသည်။
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ငွေကျပ် ၂၃၆၅၈၁၃ ဒသမ ၂၁၈ သန်း တောင်းခံခဲ့ပြီး ယင်းတောင်းခံငွေမှ ၃၄ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အသုံးပြုကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
တပ်မတော်က ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းတွင်မူ ငွေကျပ် ၂၄၈၀၃၄ ဒသမ ၇၂၃ သန်း ထပ်မံတောင်းခံထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရှိရသည်။
အဲ့ဒါကတော့ ကော့တောင်(လိပ်ကျွန်း)အရေးနဲ့ပါတ်သက်လို့ အကူအညီအတွက်(သို့)အကူအညီပေးသူ
တွေအတွက် အလှူငွေတွေကောက်ခံနေတယ်ဆိုပြီးတွေ့လိုက်ရလို့ပါ။ အမှုအတွက် ရှေ့နေအတွက် ကုန်ကျစရိတ်စသဖြင့်နဲ့တောင်းဆိုနေကြတာတွေ့လာရပါတယ်။ လိပ်ကျွန်းနဲ့ ကော့စမွေမှ ကျွန်တော့်
ငွေအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာက ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့
စပြီးအကောင်ထည်ဖေါ်လုပ်ဆောင်ကတည်းက တိတိကျကျဆိုရလျှင် ၂၀၁၄ ၁၀ ၀၅ ရက်နေ့ကစပြီးတော့ အမှုအတွက်ခရီးစတင်ဖြစ်ပါတယ်။ သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူနှစ်ဦးအပါအ၀င်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်
အလွဲခံရသူများဖြစ်ကြတဲ့ ဦးအောင်မျုိုးသန့်၊ ဦးကျော်သောင်း၊ ဦးမိုးဝေ၊ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့နေ၊ စူရတ်မှရှေ့နေများဘဲဖြစ်ကြပါတယ်၊ နောက်တခေါက် တရားရုံးမှာသက်သေများရုံးချိန်းကို ၂၀၁၄ ၁၀ ၁၄ ရက်နေ့မှာထပ်မံသွားရောက်ရာမှာလဲအထက်ဖေါ်ပြပါကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဘန်ကောက်မှသတ်သတ်လိုက်
လာတဲ့ ရှေ့နေများကောင်စီမှ ရှေ့နေများကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖြစ်ကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ၁၀ ၂၄ ရက်နေ့မှာတော့ ခလေးနှစ်ဦးရဲ့မိဘများနဲ့အတူ သံရုံးမှာတာဝန်ခံများ မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ထောင်ဝင်စာတွေ့တယ်၊ အဲ့ဒီနောက်အစိုးရတရားစီရင်ရေးရှေ့နေရုံး (ကော့စမွေ)ကိုသွားရောက်ပြီး အမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည်များကို
ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်၊။ အဲ့ဒီခရီးစဉ်များနဲ့ နောက်တကြိမ်ထောင်ဝင်စာမသွားခင် သံရုံအစည်းအဝေးများ၊ မိဘများကိုသွားခေါ်ဖို့ ကိုထူးချစ်၊ ကိုကျော်သောင်းတို့မှ သံရုံးနှင့်အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်
တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ စတဲ့ခရီးစဉ်လုပ်ဆောင်မှုများတလျောက် ကုန်ကျစရိတ်များကို သံရုံး၊မိမိတို့ရုံးနှင့်၊ ကျန်တဦးချင်းစသည်တို့မှကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကုန်ကျခံကာမနေ့ကပြန်ရောက်သည်အထိ ဤအမှုအတွက်ကောက်ခံနေသည်ဆိုသော မည်သည့်အလှူခံဌာန မည်သည့်အလှူငွေအထောက်အပံ့ကိုမှ လက်ခံသုံးစွဲခြင်းမရှိသေးပါကြောင်းသိစေလိုပါတယ်၊၊
များက အဖွဲ့အစည်းတခုမှသော်လည်းကောင်း၊ တဦးတယောက်ထံမှသော်လည်းကောင်း ယခုအမှုနှင့်
ပါတ်သက်ပြီး အသုံးစရိတ် တောင်းခံခြင်း သုံးစြွဲခင်းမရှိပါကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ ယခုကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီးငွေကြေးတစုံရာရရှိရန်၊ နာမည်ရရန်စသဖြင့် အမြတ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ လွှတ်တော်တွင်အမတ်အချို့မှ စုပေါင်းပြီး ကျပ်သိန်း ၃၀၀ ကိုအမှုအတွက် သုံးရန် (နုတ်ကတိအားဖြင့်) လှူဒါန်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတော့တရားဝင်သိရပါတယ်။
ထိုငွေများကိုသုံစွဲခြင်းဆိုင်ရာမှာလည်း မိမိတို့အားတိုက်ရိုက်ပေးလှူသုံးစွဲစေခြင်းမျိုးမဟုတ်သလို သုံးစွဲရန်လည်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှမတောင်းဆိုထားပါ။ ထိုငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာကိုလည်း သံရုံး၏
လှူခြင်တန်းခြင်သူများအနေဖြင့် စေတနာအလျောက် မစီစစ်မိဘဲ ကိုယ်ကျုိုးရှာသူများကို လှူဒါန်းမိပြီး မိမိတို့အားလှူဒါန်းသလို၊ မိဘများအားလှူဒါန်သလိုမျိုး ဖြစ်သွားမည်ကိုမလိုလားပါ၊ မိမိတို့မှလဲခုအချိန်ထိ လှူဒါန်းငွေတောင်းခံခြင်း လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတာကို အများသိစေရန် ထပ်မံပြောကြားလိုပါတယ်။
ကောင်းပြီ အမှုလိုက်ခကုန်ကျငွေအတွက်ကကော (ရှေ့နေစရိတ်ပေါ့) -- ဒီလိုရှိပါတယ်
၂၀၁၄ ၁၀ ၂၂ ရက်နေ့က သံရုံးတွင် မိဘများ၊ သံအမတ်ကြီး၊ မိမိတို့အဖွဲ့နှင့်အတူထိုင်းရှေ့နေများ
ကောင်စီမှလူကြီးမင်းများ၊ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏နာယကကြီး အာကျန်ခရိုင်ဆတ်ပါဝင်တဲ့လူ့အခွင့်အရေး
ပေးဆောင်ရန်အတွက် ရှေ့နေများကောင်စီဥက္ကဌကြီးအားမေးမြန်းရာ ဥက္ကဌကြီးမှ " ရှေ့နေစရိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်စီတွင် အသုံးစရိတ် ရှိပါတယ်၊ ပေးရန်မလိုပါဟု တချိန်တည်းမှာဘဲ အများရှေ့မှာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် "
မိမိဆန္ဒကိုပြောရလျင်ဖြင့် ဤအရေးသည်မိမိတို့အမျိုးသားရေး၊ မိမိတို့လူမျိုးရေးဖြစ်သလို ထိုင်းရှိရ္ပေ့ပြောင်း
အလုပ်သမားများအတွက်အင်မတန်မှကို အရေးကြီးပါတယ်၊ နှစ်နိုင်ငံအတွက်ထဲမဟုတ် ၃ နိုင်ငံဆိုင်တဲ့
အရေးပါ၊ နောက်ပြီးယခုအလုပ်ဟာ အန္ဒရာယ်ကိုလွယ်ပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ်လဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) မြန်မာတွေထိုင်းမှာကော နေရာတကာမှာမျက်နှာမငယ်ရေး၊
(၄) မြန်မာတွေကိုအရင်လိုလုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိ ထိုင်းတွေကိုရစေဖို့စတဲ့
စလုပ်ကထဲက အလှူအငွကိုရည်မှန်းပြီးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လေတော့ အလှူငွေရရမရရ ရှိရှိ မရှိ ရှိ ကျွန်တော်တို့ အနေနှင့် ပြီးသည့်တိုင်အောင်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး သံရုံး၊ရှေ့နေများကောင်စီ၊
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်စသည်တို့နှင့်လက်တွဲကာ စွမ်းသလောက် လုပ်ကိုင် သွားမယ်ဆိုတာ
08:00 ဘာသာရေး No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းမြို့နယ် အုန်းတောစံပြကျေးရွာ မှ့
နှစ်သည် သေဆုံးပြီး ၂ရက်မြောက်အထိ မပုပ်မသိုး၊အနံမထွက်ပဲ
တိုက်ခွဲအမှတ်၃၂ သဲအင်းဂူဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာ အောင်ပန်းစွာ
တောရ ချောင်းဦးမြို့် ၉ရက်အဓိဌာန်
လူဖြစ်ကျိုးနပ်စွာနဲ့ အောင်လံဆရာတော် ကြီးနှင့် ဆရာတော်ဦးဥက္ကဌ တို့၏ တပည့်သားပီသကြောင်းပြသသွားခဲ့ပြန်ပါပြီ
ဒီလိုကျင့် ရင် ဒီလိုသေလို့ရတယ်လို့
From: Theinngu 32 သဲအင်းဂူ ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကမ္ဘာကြီး ၆ ရက်ကြာ အမှောင်ကျ သွားမည်ဟု အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေ
13:48 နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
နေမုန်တိုင်းထန်ခြင်း ဖြစ်စဉ် သရုပ်ဖော်ပုံ။
နေမုန်တိုင်း ထန်ခြင်း ဖြစ်စဉ် တစ်ရပ်ကြောင့် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ကမ္ဘာကြီးမှာ ခြောက်ရက်ကြာ အမှောင်ဖုံးလွှမ်း သွားလိမ့်မည် ဆိုသည့် အွန်လိုင်း ပေါ်တွင် ပျံ့ နှံ့ လျက် ရှိသည့် သတင်းတစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး နာဆာက ငြင်းပယ် လိုက်သည်။
ဖျော်ဖြေရေး ဝက်ဘ်ဆိုက် Huzlers.com တွင် "၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်း ကမ္ဘာတွင် ခြောက်ရက်ကြာ လုံးဝ အမှောင်အတိ ကျသွားမည် ဟု နာဆာ အတည်ပြု"ဟူ၍ သတင်း တစ်ပုဒ် ဖော်ပြခဲ့ရာ ယင်းသတင်း အွန်လိုင်းပေါ် ရောက်ချိန်မှ စပြီး သတင်းမှန် သတင်းစစ် အဖြစ် ယုံကြည် ပျံ့ နှံ့ မှုများ ကျယ်ပြန့် သွားခဲ့သည်။
"ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်ကနေ ၂၁ ရက် အထိ ကမ္ဘာမြေ ပေါ်မှာ ခြောက်ရက်ကြာ လုံးဝ မှောင်သွား လိမ့်မယ်။ နေမုန်တိုင်းထန် ဖြစ်စဉ် ပေါ်ပေါက် မှာ ဖြစ်လို့ဖုန်နဲ့ စကြဝဠာ အမှိုက် သရိုက်တွေ ပြည့်သိပ်ဖုံးလွှမ်း သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း နေအလင်းရောင် ပျောက် သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့နာဆာက အတည်ပြု ထားပါတယ်"ဟု ယင်း Huzlers.com သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။
Huzlers.com ၏ ဖော်ပြချက်ကို နာဆာက တုံ့ ပြန် ရှင်းလင်းမှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အေဂျင်စီက မည့်သည့် တရားဝင်ပြောဆိုမှုမှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ပြန်လည် ဖော်ပြလိုက်သည်။ ထို့ပြင် Huzlers.com ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယ်တိုင် ကလည်း ၎င်းတို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် အပျော်ဖတ် သတင်းသာများ၍ အလေးအနက် မထားကြရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
Ref: Zee News
13:42 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
သတင်းထောက်က နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ပေါင်းပါတယ် နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါဘူးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်း ပေါင်းပါတယ် အစိုးရ လော်ဘီမလုပ်ပါဘူးတပ်မတော် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ရင်းနှီးလည်း တပ်မတော်ဘက်မျက်နှာမလိုက်ပါဘူးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးလည်းလက်နက်ကိုင်တွေဘက်လိုက်မရေးပါဘူး
နောက်ပိုင်းမှာ သတင်းထောက်အချို့တွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ သတင်းထောက် အလုပ်ကို ရောထွေးလာတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အခြေခံကလည်း တချို့ ကိစ္စတွေမှာ အယ်ဒီတာတွေလိုအပ်တာလည်းပါတယ်လို့ထင်တယ်။ နိုင်ငံရေးမှသတင်းထင်ကြတယ်။ နိုင်ငံရေးသတင်းရေးတဲ့ သတင်းထောက်ဆိုရင် မျက်နှာရတယ်။ စီးပွါးရေး သတင်း လူမှုရေးသတင်း ယဉ်ကျေးမှုသတင်းတွေဟာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်ဖို့ နောက်ပိုင်းမှာအတော်ခက်လာတယ်။ ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဆိုတော့ကာ ဘာဖြစ်ဖြစ် သတင်းထောက်ဟာ သူရေးတဲ့ သတင်းကို စာမျက်နှာပေါ်မြင်ချင်ကြတယ်။
အဲဒိတော့ နိုင်ငံရေး သတင်းတွေကို လိုက်ရေးကြတယ်။ နိုင်ငံေ၇း သမားတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းလာကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက နိုင်ငံရေးလုပ်သူဆိုရင် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘာရယ်ညာရယ် မဟုတ်ဘူး။ လူအထင်ကြီးကြတယ်။ ပါတီ တံဆိပ် ရင်ဘတ်ထိုးထားရင် ကောက်စိုက်သမ တောင် အကြွေးမတောင်းရဲ တဲံ့ ခေတ်ဖြစ်နေပြီ။
လူမှုရေးယောင်ယောင် နိုင်ငံရေးယောင်ယောင်နဲ့ ရောထွေးနေတဲ့ ခေတ်မှာ သတင်းသမားက အဲဒိယောင်ယောင်တွေကြားထဲမှာ သွားယောင်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက် မှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။
သတင်းထောက်ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ရောထွေးရင် သတင်းစာ သြဇာ ကျဆင်းတတ်ပါတယ်။
( ကိုယ့်တစ်ဦးတည်း အမြင်ဖြစ်ပါတယ် မည်သူမဆို ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်)
စွပ်စွဲခံ မြန်မာ နှစ်ဦး နှင့် ထိုင်းလူသတ်မှု နောက်ဆုံးရသတင်း
13:42 သတင်း No comments
မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဟု ထွက်ဆိုစာကို ထိုင်းအစိုးရရှေ့နေများရုံးချုပ်သို့ပေးပို့
ဖမ်းဆီးခံမြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးက ပြစ်မူကျူးလွန်ကြောင်းမရှိဟု ထွက်ဆိုသည့် စာကို ထိုင်းအစိုးရရှေ့နေများရုံးချုပ်သို့ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ မိဘများနှင့်မြန်မာသံရုံးအထူးအဖွဲ့က ထိုင်းစံတော်ချိန်နံနက် ၉နာရီခွဲအချိန်တွင် သွားရောက်ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံရောက် 7Day သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ မိဘများသည် အစိုးရရှေ့နေရုံးချုပ်သို့ တင်ပြစာပေးပို့အပြီးတွင် မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးများထံ ၎င်းတို့၏သားများ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံခဲ့ရကြောင်းကိုလည်း စာပို့တင်ပြခဲ့သေးသည်။
မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး အပြစ်မရှိကြောင်း ထွက်ဆိုစာကို ထိုင်းအစိုးရရှေ့နေများရုံးချုပ်သို့ ပေးအပ်သည့် ဓာတ်ပုံများ
13:39 သူ့အတွေး သူ့အမြင် 1 comment
ဒီနေ့ စတေးတပ်စ်ကတော့ …
ခါတော်မီ ကိုပါကြီး ဖြစ်သွားပြီး …
ဆန္ဒပြပွဲတွေ အားချင်းလုပ်ဖို့…
စီစဉ်နေသူများ အတွက် ….
အောက်တိုဘာ ၂၅ရက်နေ့ မှာပဲ …
ကိုပါကြီး သေဆုံးတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို …
ကျိုက်မရော မြို့ မရဲစခန်းက …
သေမှုသေခင်း အမှတ်စဉ် ၁၁/၂၀၁၄ နဲ့…
အစိုးရက ဒီကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ …
စလုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ …
သေမှုသေခင်း ဖွင့်တယ် ဆိုတာ ….
ဘယ်လို ဆိုတဲ့ အကြောင်း …
ကျွန်တော် အတတ်နိူင်ဆုံး ရှင်းလင်းကြည့်ပါမယ် …
ဓမ္မတာ အတိုင်း မဟုတ်ပဲ သေဆုံးခဲ့ရင် …
သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းကို ….
သေမှုသေခင်း ဖွင့် စစ်ဆေးရပါတယ် …
သေမှုသေခင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးတာနဲ့…
ရဲ အရာရှိဟာ ဖြစ်စဉ်ကို …
အသေးစိတ် စတင်စုံစမ်းပါလိမ့်မယ် …
ဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်တဲ့ သူတွေ အားလုံး …
မျက်မြင်သက်သေတွေ အားလုံးကို …
သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး …
ထွက်ချက်များ ရယူပါလိမ့်မယ် ….
မြေမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းတစ်ခုကို ….
ကျင့်ထုံးပုဒ်မ ၁၇၆(၂) အရ …
တရားသူကြီး တစ်ဦးဆီက ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းခံရပါမယ် …
သုံးပတ်ထက် ကျော်လွန်နေပြီဆိုရင်တော့ …
မြို့ နယ်ဆရာဝန် ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ပါ လိုပါတယ် ….
အလောင်းဖော်တဲ့ အခါ …
သူ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့…
မျက်မြင်သက်သေတွေ ပါ ပါရပါတယ် …
အလောင်းစစ်ဆေးတဲ့ နည်းတွေကတော့ …
CID , မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးနဲ့….
သူ့ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ် …
အခုလို တစ်လမပြည့်သေးတဲ့အလောင်းကို မပြောနဲ့…
တစ်နှစ် နီးပါးကြာတဲ့ အလောင်းကိုတောင်မှ ….
စနစ်တကျ စစ်ဆေးလို့ ရပါတယ် …
အလောင်းက အရိုးတွေ ကျိုးနေသလား …
ဘယ်နှစ်ခု ကျိုးသလဲ …
ဘယ်အရိုးတွေ ကျိုးသလဲ …
သေနတ်ဒဏ်ရာဆို ကျည်စကျည်နတွေရှိလား …
တကယ်လို့ အဆိပ်မိတယ်ဆိုရင် …
အလောင်းပေါ်က မြေမှုန်တွေကို …
မှုခင်းဓာတ်ခွဲခန်းကို ပို့ ဖို့ လိုမလား ….
စသဖြင့် စသဖြင့် ….
စစ်ဆေးတဲ့ နည်းတွေကတော့ ….
အများကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
မူခင်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့….
ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့….
အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး …
အမှုကို တည်ဆောက်ပါလိမ့်မယ် ….
သေမှုသေခင်းနဲ့ ပဲ ရုံးကိုတင်သင့်သလား ….
လူသေမှု နဲ့တရားစွဲသင့်လား ….
လူသတ်မှုနဲ့တရားစွဲသင့်လားဆိုတာ …
မြို့ နယ် ဥပဒေရုံးကို …
ဥပဒေ အကြံပြုချက် တောင်းခံပါလိမ့်မယ် …
အမှုတွဲကို တရားရုံးကို တင်ပို့ ရမှာပါ …
တရားရုံးအနေနဲ့ ကတော့ …
အမှုတွဲထဲမှာပါတဲ့သက်သေတွေအားလုံးကို …
ရုံးမှာ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
ပြီးရင်တော့ တွေ့ ရှိချက်အပေါ်မူတည်ပြီး …
အမှုကို အမိန့် ချပါလိမ့်မယ် …
ဒါက ပရိုဆီဂျာ ဖြစ်ပါတယ် …
အဲဒီတော့ ပြောရရင် …
ကိုပါကြီးအရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေး ဆိုသူတွေအတွက် …
ဘာဆက်အော်ရမှန်း မသိတော့ဘဲ …
ခေါင်းစဉ် ပျောက်သွားစေပါတယ် ….
ဒါမှမဟုတ် … မပျောက်ပါဘူး .....
ကျွန်တော်တို့ က ဆက်ပြီး ဆန္ဒပြအုန်းမယ် …
ကိုပါကြီး အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးလို့…
ဆက် အော်ချင်သေးလို့ ပါ …
အော်လို့မ၀သေးလို့ ပါ ဆိုရင်လဲ ….
သဘောရှိ ကလောဟိပါပဲ ….
၂၀၁၄ လော်ခီးလာညီလာခံတုန်းက …
ကိုပါကြီး နဲ့စောဆန်းအောင်တို့ …
အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံ ဖြစ်ပါတယ် …
၂၀၁၀တုန်းက ကိုပါကြီး ပုံဟောင်းတွေလာတင်ပြီး …
လျှောက်ပြောနေတာပါ ဆိုသူတွေအတွက် …
မေတ္တာလက်ဆောင် ပါ …
အားလုံး သံသယကင်းအောင် …
သေမှုသေခင်း ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အစိုးရကိုတော့ …
အင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုပါလို့…
မှတ်ချက်ပြုလိုက်ပါတယ် …. ။ ။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသားတစ်ဦး ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်း ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသားများနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သော အမျိုးသမီး ၁ဝ ဦးမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပွဲကျင်းပ
22:00 ဘာသာရေး, အတုယူစရာ No comments
အစ္စ လာမ်ဘာသာဝင် အမျိုးသားတစ်ဦး မှ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကူးပြောင်းဝင်ရောက် ခြင်းနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုး သားများနှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သော အမျိုးသမီး ၁ဝဦးမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာ သာသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
''မဘသ(ဗဟို)အနေနဲ့ဆိုရင် ငါးကြိမ်မြောက်ရှိပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်းလာတာကလဲ သူတို့စိတ် ဆန္ဒအတိုင်းပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီကို ဆက်သွယ်လာ လို့ ပြောင်းပေးတယ်။ စာချုပ်လဲပေး တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကူးပြောင်းချင် တယ်ဆိုရင် တရားဝင်လျှောက်လွှာ တင်ရတယ်။ သေချာအောင်လုိ့ အချိန် ငါးရက် ထပ်ပေးတယ်။ သေချာပြီ ဆိုရင်တော့ ပြောင်းပေးတယ်''ဟု အမျိုးဘာသာသနာစောင့်ရှောက် ရေး(ဗဟို)ဥပဒေအကြံပေးရှေ့နေ ဦးအေးပိုင်က ဆိုသည်။